ကလေးသူငယ်များအားအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ - အိန္ဒိယမှရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဗျူရိုကိန်းဂဏန်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်အပေါ်ညစ်ညမ်းမှု
စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်မဟာမိတ်သိပ္ပံ၏ Open Journal
တစ်နှစ်တာ: 2015, အတှဲ: 6, Issue: 2
ပထမစာမျက်နှာ : (112) နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ: (116)
ISSN Print: 2394-2053 ။ အွန်လိုင်း ISSN: 2394-2061 ။
အပိုဒ် Doi: 10.5958 / 2394-2061.2015.00007.5
Shaik Subahani1, Rajkumar Ravi ဖိလိပ္ပု2,*
2တွဲဘက်ပါမောက္ခ, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာနနှင့်အတိုင်ပင်ခံ, အိမ်ထောင်ရေးနှင့် Psychosexual Disorders ဆေးခန်း, ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာပညာရေးနှင့်သုတေသန Pondicherry ၏ဂျဝါဟာလာ Institute မှ - 605006, အိန္ဒိယ
* ပေးစာယူ: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့အမျိုးမျိုးသောသုတေသီများအပြုသဘောမရှိ, ဒါမှမဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့များရှာဖွေတာနဲ့အတူအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမှီကသက်သေအထောက်အထားကလေးသည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်ညစ်ညမ်း, နှင့်ကလေးများဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများအကြားတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အသင်းအဖွဲ့ရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
အိန္ဒိယကနေတစ်ခုအစောပိုင်းကလေ့လာမှုဆင်တူနည်းစနစ်ကိုသုံးပြီးကျနော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းဗျူရိုကနေကာလ 2000-2012 ဘို့, ကလေးတွေဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများအပေါ်အသေးစားမိန်းကလေးများအမည်ရမုဒိမ်းမှုနှင့်ဝယ်ယူရေးအရာရှိတဦးကစာရင်းဇယားရရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ 1,00,000 လူတွေနှုန်းအသုံးပြုသူအရေအတွက်ကဖြင့်တိုင်းတာသည်, ဤပြစ်မှုများ၏နှုန်းထားများနှင့်အင်တာနက် access ကိုအကြားအသင်းအဖွဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
တောင်မှလူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်းအဘို့အဆုံးပြီးနောက်ကျနော်တို့ကအင်တာနက်ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကလေးများဆန့်ကျင်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤပြစ်မှုများ၏နှုန်းထားများအကြားသိသာထင်ရှားသော linear အသင်းအဖွဲ့များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်အင်တာနက်များ၏ကြီးထွားမှုနှုန်းနှင့်ဤပြစ်မှုများ၏တိုးနှုန်းအကြားမျှဆက်စပ်မှုရှိ၏။
ညစ်ညမ်းနှင့်လူကြီးများ၏အဓမ္မပြုကျင့်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့ဆွေးနွေးငြင်းခုံအောက်မှာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအင်တာနက်ကရရှိနိုင်မှုနှင့်ကလေးများဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများအကြားတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှအသင်းအဖွဲ့၏သွယ်ဝိုက်သက်သေအထောက်အထားသည်။ ကလေးညစ်ညမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ဖိနှိပ်ရန်အင်တာနက်၏စည်းမျဉ်းဥပဒေကဤပြစ်မှုအနည်းဆုံးအချို့တားဆီးနိုငျသညျ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိကလေးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုနှုန်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကဤတိုးမြှင့်ခြင်းသည်အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှုတိုးပွားလာမှုနှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်နေကြောင်းပြသသည်။ ထို့အပြင်ဤရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်အင်တာနက်ရရှိနိုင်မှုနှုန်းသည် ၂ ဝဝ ၅ ခုနှစ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုနှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအတွက်သိသိသာသာမြင့်တက်နေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤရလဒ်များအရယာယီအသင်းအပင်းနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအပါအ ၀ င်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုရန်အလွယ်တကူမြင်နိုင်သောအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်နွယ်မှုနှစ်ခုလုံးနှင့်ကလေးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုနှစ်မျိုးစပ်ကြားရှိကြောင်းဖော်ပြသည် ဤအသင်းအဖွဲ့ကိုရာဇ ၀ တ်မှုနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်တသမတ်တည်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည့်အတွက်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်ကလေးငယ်များအားမုဒိမ်းကျင့်မှုနှင့်အသေးစားမိန်းကလေးများ ၀ ယ်ယူခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယန္တယား၏တစ်ဦးကနံပါတ်တစ်ခုဒီအသင်းအဖွဲ့ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ ပထမဦးစွာကလေးညစ်ညမ်းစိတ်ဖိစီးမှု-diathesis မော်ဒယ်တစ်ဦးစီအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်သို့မဟုတ် paraphilias အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူမမှန်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦး Pre-တည်ဆဲအားနည်းချက်တစ်ခုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးအပြုသဘောဆောင်သည့်ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များ, စိတ်ပိုင်းနှင့်အမူအကျင့်မမှန်အမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အိန္ဒိယ setting ကိုကနေ data ကိုအကြမ်းဖက်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးသိသိသာသာအရေအတွက်ကစိတ်ရောဂါခံစားရစေခြင်းငှါအကြံပြု, ဤပြစ်မှုကျူးလွန်သူပြစ်မှုကျူးလွန်သောသူတို့၏တံခါးခုံကိုလျှော့ချရသောထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှုမတည်ငြိမ်မှုများနှင့် Impulse အဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိသည်;  သို့သော်ဤလေ့လာမှုအထူးသမ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူဆန်းစစ်။
ဒုတိယအချက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်ငယ်ရွယ်သောကလေးများပုံဖော်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေထိတွေ့ခြင်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအဖြစ်လူသိများ - အင်တာနက်ပေါ်ရှိဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိုကြည့်ရှုခြင်းစားသုံးသူများပြုခဲ့လျှော့ချ, နှင့်ကလေးများသာသင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်အဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်ရသော (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဖော်ပြထားတဲ့ "မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီ" အလားတူ) ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဒဏ္ဍာရီတစ်ခုလက်ခံမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ psychosexual ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစောပိုင်းအဆင့်မှာထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းဖြစ်သည်။  Exposure အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်တာ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ perpetrating ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ 
တတိယကလေးညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုများအတွက် medium အဖြစ်အင်တာနက်ကို၏ထူးခြားမှုနှစ်ခုလုံးကိုယဉ်ကျေးမှုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်မှာထားပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့, ညစ်ညမ်းပစ္စည်းမှကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခွင့်, သာ. ကြီးမြတ်လူမှုရေးလက်ခံမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမည်  ပို. ပင်ရိုးရာ setting တွင်, ညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ဦးစားပေးပြောင်းလဲမှုများဖော်ပြထားပါပြီ [31,32] ။ တစ်ဦးချင်းအဆင့်မှာ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစေရန်တိကျသောအင်္ဂါရပ် - က "သုံးဆ-တစ်ဦးကအင်ဂျင်"  - အာရုံကြော plasticity နှင့်တစ်ဦးစွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုမှဦးဆောင်, ဦးနှောက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ဆွတဲ့ "supra-ပုံမှန်" အဆင့်ကိုထောက်ပံ့ အသုံးပြုမှု၏ပုံစံ။ ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကျူးလွန်တစ်ဦးမွငျ့မားသောစွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့သော်နေဆဲ, မရှင်းလင်းသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, အပြုသဘောဆက်စပ်မှုစစ်မှန်သောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးမျိုးညွှန်ပြတော်မမူကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိင်ဆီသို့ဦးတည်လူဦးရေဖြန့်ဖြူးအတွက်အပြောင်းအလဲတန်ဖိုးကိုစနစ်များ, မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သဘောထားများအပါအဝင်အခြားလူမှုရေးအကြောင်းရင်းများ၏တစ်ဦးအမျိုးမျိုး, အလားအလာအမျိုးသားတို့တဘက်၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏မြင့်တက်မှုနှုန်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။  သို့သော်ဤစကားမှန်သည်ကိုပင်လျှင်, ငါတို့သည်မအုပ်စိုးလို့မရဘူး လိင်၏ deviant ပုံစံများအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ကိုအင်တာနက်များ၏တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ထွက်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးစနစ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏လေ့လာမှုအမည်မသိစစ်တမ်းများအပါအဝင်အခြားသုတေသနနည်းစနစ်များ, ဤမေးခွန်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်အဖြေပေးရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။